वीर अस्पतालका न्युरो सर्जनको राजीनामा, भन्छन्– चाकडी र घुस दिन नसक्दा जागिर छाड्नुप-यो – Health Post Nepal
वीर अस्पतालका न्युरो सर्जनको राजीनामा, भन्छन्– चाकडी र घुस दिन नसक्दा जागिर छाड्नुप-यो
२०७५ मंसिर ४ गते १३:४५
वीर अस्पतालमा नवौँ तहमा कार्यरत न्युरो सर्जन डा. ध्रुव अधिकारीले चाकडी र घुसको रकम पुर्याउन नसकेकाले एक वर्षदेखि पद खाली भएको ठाउँमा समेत पोस्टिङ नगरेको भन्दै पदबाट राजीनामा बुझाएका छन् ।
उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी ३ मंसिरमा मन्त्रालयमा दर्ता गराएको राजीनामापत्रमा एक वर्षदेखि तलबविहीन भएर वीर अस्पतालको न्युरो सर्जरीमा कामकाज गर्दै आएको उल्लेख छ । उनले स्वास्थ्यसचिव डा. पुष्पा चौधरीले दरबन्दी रिक्त हुँदाहुँदै पनि पोस्टिङ नमिलाइदिएको बताएका छन् । ‘पद्मा अर्याल मन्त्री हुँदादेखि धाएको धायै छु, अहिलेको मन्त्रीले पनि बारबार सचिवलाई उहाँको मिलाइदिनुस् भन्नुभएको हो,’ अधिकारीले भने, ‘उहाँले गरिदिनुभएन, अहिलेको निमित्तसचिवले पनि म सक्दिनँ भन्नुभयो,’ डा. अधिकारीले भने ।
उनले अस्पताल प्रशासनले बारबार पत्र लेख्दा र अथक प्रयास गर्दासमेत पद खाली भएको र अन्य उम्मेदवारसमेत नभएको अवस्थामा पनि आफ्नो पोस्टिङ वीरमा नगरेको भन्दै आजित भएर पदबाटै राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन् । उनले पोस्टिङ नगरी पूर्वाग्रहका साथ दुःख दिएकाले र चाकडी र घुससमेत मागअनुसार दिन अक्षम हुँदा राजीनामा दिएको पत्रमा खुलाएका छन् । पत्रमा उनले कहाँ कसले घुस माग्यो भन्ने खुलाएका छैनन् ।
सरकारी सेवामा सो पदमा पोस्टिङका लागि उनी एक मात्रै उम्मेदवार हुन् । ‘मबाहेक अर्को सो पदका लागि योग्य मान्छे बाँकी छैन,’ उनले भने, ‘पोस्टिङका लागि चाकडी र घुस बुझाउनुपर्ने भयो, जुन मैले सकिनँ ।’
डा. अधिकारी गत मंसिरमा नवौँ तहमा बढुवा भएका थिए । बढुवापछि उनको पोस्टिङ पोखरा भएको थियो । पोखरामा न्युरो सर्जरी सेवाका लागि टिम, पूर्वाधार नभएको भन्दै उनले काठमाडौंमै बस्ने इच्छा देखाएका थिए ।
तत्कालीन उपकुलपति डा. गणेश गुरुङले समेत वीरमा न्युरो सर्जरी विभागमा जनशक्ति अपुग भइरहेको भन्दै काजमै भए पनि डा. अधिकारीलाई न्याम्समै खटाइदिन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थिए । पछि वीरमा नवौँ तहमा कार्यरत डा. गोपालरमण शर्माले समेत राजीनामा दिएपछि पद रिक्त भएको थियो ।
डा. अधिकारीले अहिले न्युरो सर्जरी विभागमा आफू र डा. प्रकाश विष्ट मात्रै प्राध्यापकका रूपमा रहेको र विद्यार्थीसमेत भर्ना भएकाले पनि आफूले छाड्न नमिल्ने अवस्था रहेको सुनाए । ‘केही समय बाँकी छ, वीरमा बसेर गरिब बिरामीको सेवा गरौँ भन्दा पाइनँ,’ उनले भने, ‘म निजीमा बिरामी नपाएर सरकारीमा झुन्डिन खोजेको होइन ।’
४२ वर्ष सरकारी सेवामा बिताएका डा. अधिकारीले ३० वर्ष आठौँ तह (मेडिकल अधिकृत) तहमा सेवा गरेका थिए । स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवका स्वकीय सचिव महेश चौरसियाले डा. अधिकारीलाई वीरमा पोस्टिङका लागि मन्त्रीका तर्फबाट सकारात्मक पहल हुँदा पनि नतिजा दिन नसकिएको बताए । ‘मन्त्रीको आदेशमा म आफैँ पनि डा. अधिकारीलाई लिएर सचिवकोमा गएको हुँ,’ चौरसियाले भने । मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार मन्त्रालयले कम्तीमा एकदिन भए पनि पोस्टिङ भएको ठाउँमा नगईकन नियमाअनुसार पनि सरुवा गर्न नमिल्ने भएकाले पोखरा गएर हाजिर भइदिन आग्रह गर्दा डा. अधिकारीले नमानेकाले नै समस्या भएको हो । बढुवाअनुसारको पोस्टिङ कार्यान्वयन नहुँदा डा. अधिकारीले एक वर्षसम्म तलबविहीन भएर बस्नुपरेको छ ।
डा. ध्रुब अधिकारी